Robot ahịa ▼
Robot azụmaahịa raara nye ahịa ọla edo (xauusd).
Robot ịzụ ahịa raara nye ahịa cryptocurrency.
Robot ịzụ ahịa raara nye ahịa mmanụ.
Robot azụmaahịa raara nye ahịa Forex.
Robots azụmaahịa dabere n'ahịa.
Ntinye ego Crypto ▼
DT Mkpụrụ ego
Tinye ego na Big Data cryptocurrency.
Jiri crytos gị tinye ego na ọla edo na diamond.
Tinye ego na ezigbo ala na blockchain Ethereum.
Zụta, chekwaa ma chebe karịa 250 cryptocurrencies
Tutorial Ihe nkuzi vidio, site na ngọngọ ruo na mkpuchi
Ihe omuma di oke mkpa banyere ihe nkpuchi obula
Jikọọ na atg-system.com
Jikọọ na atcbot.io
Banye na MetaCapital
Jikọọ na Equiti
Robot Azụmaahịa Gold
AutoTrade Gold 5.0 bu a ere robot Indonesian akpaka dabere na ahịa ọla edo. A na-akpọkwa ATG. Goldokwu, Onwe Gold ma ọ bụ EA Robot Gold Site n'aka ndị ọrụ ya, ọ na-achọ inweta uru kwa ụbọchị n'etiti 0,5 na 1,5% nke isi obodo gị. Ị nweghị ike ịla n'iyi karịa 3% kwa ụbọchị. Robot a na-azụ ahịa na ọnọdụ scalping na-emepe naanị otu ọnọdụ n'otu oge. N'ịbụ nke zuru oke, ọ bụrụ na ATG 5 na-edekọ mfu, ọ ga-agbalị imeghachi uru ya n'ụbọchị na ahia nke abụọ. Chọpụtakwa Crypto AutoTrade, A ọhụrụ trading robot na-eme 7/7 ụbọchị uru na Bitcoin.
Debanye aha na AutoTrade Gold nkuzi emelitere
📀 EA ATG 5 dị maka nbudata ma ọlị broker.
Ọnụ ego ikikere 1 na Auto Trade Gold
akwadoro kacha nta n'ozuzu ego
Atụ anya uru kwa ọnwa
Uru nke robot AutoTrade Gold
E nwere ego
Jikwaa ma jikwaa ego nke gị na ebe a broker LegoMarket LCC iji ngwa MetaTrader 4 ou na broker nke gị oke site n'ịzụrụ na nbudata robot site na webụsaịtị Pansaka (nzọụkwụ 2 nke nkuzi n'okpuru). Naanị ị nwere ike ịnweta ntinye ego gị: Ego mbụ + ego enwetara + ọmụrụ nwa.
Enweghị ngwanrọ ịwụnye. Enweghị nkà ịzụ ahịa achọrọ.
Ihe ahia ahia mepụtara Pansaka, lekwasịrị anya na ahịa ọla edo.
Arụ ọrụ ± 15%
Nkezi ego nha nke 15% na nloghachi kwa ọnwa.
Ahụmahụ siri ike
Ihe karịrị afọ 2 na ọnọdụ ahịa n'ezie.
Malite ahụmịhe site na opekata mpe ego nke $ 250.
Nsonaazụ pụtara ìhè na ngwa gị MetaTrader 4.
15% ego / ọnwa na AutoTrade Gold
jiri Azụmahịa Gold 5.0
🚧 Ntị, ọ nweghị vidiyo ga-adị na Youtube ma ọ bụrụhaala na a na-edozi saịtị ahụ Pantheratrade ka nọkwa ebe ahụ. A ga-emelite nkuzi a edere n'okpuru mgbe niile.
Nwere akaụntụ Crypto
Platform na-enye gị ohere ịzụta na ree cryptocurrencies gị kamakwa iji zụọ robot gị na ihe ndị ahụ broker Ahịa Lego.
Debanye aha na PantheraTrade
API ikpo okwu na-ejikọta ATG na broker Ahịa Lego.
Zụrụ ikike gị na Pansaka
Ikpo okwu njikọ na-enye ohere ịzụta ikike ndụ gị niile.
Ụlọ ihe osise Autotrade Gold na Instagram
Ngụkọta oge nke ATG 5.0 uru na-enweghị gụnyere ngwakọta ọmụrụ nwa
A ga-ewere tebụl dị n'okpuru dị ka ihe atụ ma ghara igosipụta eziokwu dị adị. Ọ na-egosi mmalite nke isi obodo gị dị ka nchikota edebe, dabere na a mmụba na-abawanye nke 15% kwa ọnwa. Ebubaghị mmasị n'ọnụ ọnụ kwa ụbọchị na mgbako a. Ọ bụrụ na ị na-ewepụ ego gị kwa ọnwa, ọ ga-ewe gị ihe dị ka ọnwa 6 iji nwetaghachi ego mbụ gị na ọnwa anọ ma ọ bụrụ na i wepụghị ihe ọ bụla.
+ Ndị na-achụ ego 300.000 Nsonaazụ TGA 5
Nkwụnye ego: 500 €
+ ikike 2 ($ 224)
Nkwụnye ego: 1500 €
Nkwụnye ego: 5000 €
+ ikike 3 ($ 560)
Nkwụnye ego: 10000 €
⚠️ Ihe ncheta na ndụmọdụ dị mkpa maka onye ọ bụla na-etinye ego
Cheta na nke a bụ itinye ego dị ize ndụ, na ị na-etinye ego nke ị na-achọghị ibi ndụ nakwa na ihe mgbaru ọsọ gị bụ isi bụ ị nwetaghachi isi ego mbụ gị ngwa ngwa o kwere mee dị ka atụmatụ itinye ego gị si dị.
Atụmatụ atụ : Ana m etinye $10.000 na AutoTrade Gold. Na-ewepụghị na na 5 ọnwa, m kwesịrị okpukpu abụọ m isi obodo. Ozugbo m ruru nchikota nke $22.000, m na-amalite ịdọrọ $2000 oge ọ bụla robot na-emepụta ha n'ime izu ole na ole. N'ihi ya, m na-ewepụ $22.000 ruo $20.000 oge ọ bụla m ruru ha. M na-achọta isi obodo mbụ m n'ihe na-erughị ọnwa 9 wee nweta ego efu nke $3000 kwa ọnwa (20.000 x 15%) ekele Autotrade Gold.
5 ikikere dị dabere na ikike ịzụ ahịa gị
Enwere ike ịkwalite ikike ikike, ya bụ na ị ga-akwụ naanị ihe dị iche n'etiti ikike ugbu a na akwụkwọ ikike achọrọ. Robot anaghị ere ahịa n'okpuru isi obodo $100. Ọ bụrụ na ịwepụ wee gafere ọnụ ụzọ $50 na akaụntụ azụmaahịa gị, ị ga-atụfu ikike gị.
atụ : Ikikere 2 nwere oke na $5000 (isi ego etinyebere + ego kwa ụbọchị). Nke a pụtara na site na akwụkwọ ikike a, ozugbo ị debere isi obodo gị, dịka ọmụmaatụ $3000 wee nweta $2000 na ego, ị ga-erute oke ikike nke $5000. Site n'ebe ahụ, robot gị ga-akwụsị ịzụ ahịa. Ya mere, ị ga-enwetaghachi akụkụ nke ego gị ma ọ bụ were ikike dị elu. Cheta ịkwalite tupu robot gị akwụsị, ma ọ bụghị ya, ị ga-akpọtụrụ nkwado teknụzụ ma ọ bụ jiri aka malite njikọ robot na saịtị ahụ. Sistemụ ATG. A na-enye bọtịnụ maka nke a.
Akwụkwọ ikike 1
maka ngụkọta ego n'etiti 100 na 500 $.
Zụta ikike 1
Akwụkwọ ikike 2
maka ngụkọta ego n'etiti 100 na 5.000 $.
Zụta ikike 2
Akwụkwọ ikike 3
maka ngụkọta ego n'etiti 100 na 30.000 $.
Zụta ikike 3
Akwụkwọ ikike 4
maka ngụkọta ego n'etiti 100 na 1.000.000 $.
Zụta ikike 4
Akwụkwọ ikike 5
maka opekempe isi obodo nke 1.000.000 $.
Zụta ikike 5
Nkwado nka na ụzụ ATG 5
Ajụjụ gbasara Autotrade Gold 5.0
Fọdụ ozi ndị ọzọ gbasara Trading Bot
Enwere m ajụjụ gbasara AutoTrade Gold, Pantheratrade, Pansaka ma ọ bụ ATG Sistemu
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara AutoTrade Gold 5.0, a na m adụ gị ọdụ ka ị bịaruo onye nkwado gị nso. Nkwado nka na ụzụ si PantheraTrade bụ ndị ọrụ iri asaa. Iji kpọtụrụ ha, ị ga-achọ imepe tiketi ma kọwaa arịrịọ gị nke ọma na bekee wee tinye mgbakwunye maka nghọta ka mma. Kpọtụrụ ha naanị ma ọ bụrụ na enwere nsogbu, ma ọ bụghị kpọọ onye nkwado gị. Maka nsogbu inye ikike, kpọtụrụ nkwado Pansaka, maka nsogbu ijikọ na robot gị, masịrị saịtị ahụ Sistemụ ATG.
Mepee tiketi maka nkwado teknụzụ RDV na Telegram ka ị soro akụkọ
Worfọdụ na-echegbu onwe na Autotrade Gold 5.0?
Nkwado teknụzụ site na Panthera na-ajụ anyị, dịka onye nkwado, iji nyere gị aka na nsogbu ị nwere ike ịbịara mana ọ dị oke mkpa ka ị rịọ arịrịọ ahụ n'onwe gị site na ịmepe tiketi: https://panthera.support
Nzọụkwụ 1 / PantheraTrade
Usoro ị ga-eso iji debanye aha na rọbọt Autotrade Gold 5
Ana m akwado iji a Yahoo ma ọ bụ Gmail adreesị mgbe ị debanyere aha. Ụfọdụ enweela nsogbu ịkwado site na email na Hotmail, Live, Wanadoo, Laposte address...
Debanye aha na AutoTrade Gold 5.0
Dejupụta mpaghara 5 achọrọ:
1 - Mepụta aha njirimara gị
2 - Dee aha mbụ gị na aha ikpeazụ gị
3 - Họrọ obodo gị
4 - Tinye nọmba ekwentị mkpanaaka gị
5 - Tinye email gị (ọkachamma Gmail)
Nabata Usoro Ọrụ, wee nyefee
📨 Autotrade ezitela gị paswọọdụ gị email. Enwere ike ịgbanwe ya ma emechaa. Ọ bụrụ na ịnatabeghị ya n'ime nkeji ise, ị nwere ike ịrịọ ka chefuo paswọọdụ site na ibe nbanye.
✅ Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ cryptocurrency, ana m enye gị ndụmọdụ, ugbu a, iji mepụta akaụntụ na Binance, Coinbase, Kraken... Zenarị mgbanwe na-egbochi ịwepụ gị ihe karịrị awa 2 dị ka Crypto.com, ọmụmaatụ. Ị nwere ike ịzụta crypto na Binance na kaadị kredit gị. Agbanyeghị, ị ga-arapara n'oke mwepu nke ụlọ akụ gị kpachiri. Ka ịnyefe ụlọ akụ wee tinye ego buru ibu, ịnwere ike iji ọrụ SEPA na Binance.
Debanye aha na Binance Tutorial Binance
Ọ bụrụ na edebanyelarị nọmba ekwentị gị, ị nwere ike weghachite ya ma dochie 06 na 336 ma ọ bụrụ na ibi na France. Jiri akara oku dị ka ohere nke abụọ.
Nkeji 2 / Pansaka
Debanye aha na Pansaka iji nweta ikike ATG 5 gị
Pansaka bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ikikere niile nke ngwaahịa azụmaahịa Autotrade. Echefula na ị ga-enwerịrịUSDT ma ọ bụ Litecoin LTC na mgbanwe gị ịzụta ikike gị.
Debanye aha na Pansaka
Aha mbụ + Aha ikpeazụ
Kaadị njirimara ọhụrụ ma ọ bụ nọmba paspọtụ
Okwuntughe + nkwenye
Dejupụta ụdị Akaụntụ Crypto:
- Họrọ USDT
Adreesị Crypto: gosi adreesị nkwụnye ego gị USDT
(Ethereum ERC 20 netwọk) naanị
Nkeji 3 / Pansaka
Otu esi azụta ma ọ bụ kwalite ikike gị AutoGold 5.0?
Na peeji nke ụlọ ọrụ Pansaka, pịa taabụ Mmemme Pụrụ iche> Zụrụ ngwugwu ọdịnihu ma họrọ akwụkwọ ikike dịka ọnụọgụ ahịa nke ịchọrọ itinye.
💡 Ana m adụ gị ọdụ ka ịmalite site na akwụkwọ ikike 1 na nkwụnye ego nke $ 110 iji nyochaa ahia rọbọt na ike ọ na-enweta ego na-enweghị isi. Ị nwere ike kwalite ikikere gị site na ịkwụ ụgwọ naanị ihe dị iche n'etiti nke ọ bụla n'ime ha. Ya mere malite site na ịzụrụ Litecoin (LTC) na Binance na ego nke 250 € site na kaadị kredit.
Iji kwụọ ụgwọ akwụkwọ ikike gị wee tinye ego gị na ihe ndị ahụ broker, Anyị na-akwado ịzụrụ na ịkwụ ụgwọ na Litecoin (LTC) maka ịdị mfe ya, ọsọ ọsọ na ụgwọ azụmahịa dị ala.
Ọ na-ewe otu awa maka ikike gị iji CoinPayment rụọ ọrụ.
Nkeji 4 / Pansaka
Ịlele na ịkwụ ụgwọ maka akwụkwọ ikike gị
N'ihe atụ a, ahọpụtara m ikike 2 nke robot ATG na broker Ahịa Lego.
Bọtịnụ 1: Pịa bọtịnụ a ka ịhọrọ ịkwụ ụgwọ na cryptocurrency. Mmapụta ga-emepe, pịa bọtịnụ Crypto wee kwado ya.
Bọtịnụ 2: Kwado ma nweta akwụkwọ ọnụahịa
Nkeji 5 / Pansaka
Ịgba ụgwọ ikike gị
Nchịkọta nke ọnụahịa na ọnụ ahịa na dollar.
Wee pịa bọtịnụ Coinpayment.
Kwụpụ 6 / Coinpayment
Kwụ ụgwọ nke gị ikike Autotrade Gold na Litecoin (LTC), ya na CoinPayment.
Dejupụta ozi ịgba ụgwọ gị n'aka ekpe, ya bụ aha mbụ gị, aha ikpeazụ na adreesị ozi-e gị (Lelee na ọ dịghị njehie na adreesị ozi-e gị). N'aka nri, họrọ cryptocurrency Litecoin (LTC) maka ọnụ ahịa azụmaahịa ya dị ala.
N'ikpeazụ, pịa bọtịnụ na -acha anụnụ anụnụ n'aka ekpe, n'okpuru email, iji kwado ụdị ahụ. Ọ dịghị mkpa ịdebanye aha na CoinPayment iji mezue azụmahịa ahụ.
Ibe CoinPayment ọhụrụ ga-emeghe wee gosi gị ihe ahụ ego yanaAdreesị LTC ebe ị ga -achọ nyefee Litecoin (LTC) nke azụtara na mgbanwe gị (Binance, Coinbase, wdg).
Na Binance, ebe a bụ njikọ maka zụta Litecoin na kaadị akụ.
Kwụpụ 7 / Coinpayment
Mmecha ụgwọ maka ikikere gị Autotrade Gold.
Gaa na mgbanwe gị dị ka Binance, mee kpọmkwem ndọrọ ego naAchọrọ adreesị LTC. Cheta ịgbakwunye 0,001 LTC na ego a rịọrọ ma ọ bụghị na a ga-ajụ azụmahịa ahụ, a ga-akwụghachikwa gị site na CoinPaiement. A ga-etinye ego site na Coinpayment na nkwụghachi.
Gosi adreesị LTC nke onye nnata. Nke a bụ adreesị (eriri) ebutere na Coinpayment.
Nyefe ga-eme site na iji netwọk LTC.
gosi ego LTC site na ịgbakwunye 0,001 na ọnụahịa ikpeazụ
Wee gosipụta ụdị ahụ.
. Ga-enweta nkwenye email site na Binance na CoinPayment na-agwa gị na nnyefe ahụ gara nke ọma. Ọ bụrụ na imehie ihe, atụla ụjọ! Ị ga-enweta email iji kwụọ ụgwọ ego n'ime nkeji ole na ole site na CoinPaiment megide ụgwọ azụmahịa. Lelee spam gị. Ị ga-ekwurịrị nke gị Adreesị nkwụnye ego LTC.
Nzọụkwụ 8 / Pantheratrade
Mmepe nke a akaụntụ MT4 ahia na Pantheratrade.
Iji jiri rọbọtụ azụmaahịa dị iche iche nke ụlọ ọrụ na-enye PantheraTrade, ịkwesịrị imepe a ọkọlọtọ MT4 akaụntụ. Nke a ga-ahazi ngwaahịa niile emere gị.
Iji mee nke a, pịa njikọ ahụ Akaụntụ mgbe niile> Akaụntụ MT4. Wee pịa bọtịnụ ahụ Mepụta Akaụntụ MT4
Nzọụkwụ 9 / Pantheratrade
Gbanwee nke gị Okwuntughe nwa oge natara site na email.
Ị nwetala aha njirimara na paswọọdụ nwa oge gị site na email. Aha njirimara gị bụ Nbanye gị.
Anyị ga-agbanwe paswọọdụ nwa oge gị ugbu a.
Iji mee nke a, pịa njikọ dị n'okpuru aka ekpe nke ihuenyo: Tọgharia okwuntughe nbanye. Tinye okwuntughe nwa oge gị enwetara site na email n'ubi mbụ, wee tinye paswọọdụ nbanye ọhụrụ na mpaghara abụọ dị n'okpuru.
Nzọụkwụ 10 / Pantheratrade
Mepụta akaụntụ gị Autotrade Gold.
Mbụ, pịa njikọ ahụ Akaụntụ CopyTrade> Akaụntụ MT4. Pịa bọtịnụ na-acha anụnụ anụnụ dị n'elu aka nri: Mepụta Akaụntụ Ọhụrụ
họrọ AutoTradeGold na Họrọ udi, wee pịa bọtịnụ Mepụta Akaụntụ MT4.
Tebụl kwesịrị ịpụta na ibe ọhụrụ. Debe Akaụntụ nbanye MT4 na paswọọdụ onye na-achụ ego MT4 gị. A ga-eziterekwa gị ha site na email. Koodu ndị a ga-enye gị ohere iso azụmaahịa yana akaụntụ gị kwa ụbọchị.
Nzọụkwụ 11 / Pantheratrade
nye gị KYC iji kwado akaụntụ gị.
Iji kwado akaụntụ gị, ị ga-enyerịrị otu n'ime njirimara atọ a rịọrọ (kaadị njirimara mba, paspọtụ ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala). Nleba anya, akwụkwọ njirimara gị agaghị agwụ agwụ ma ọ bụghị ya, a ga-ajụ KYC gị ozugbo.
Họrọ ụdị ID ịchọrọ wee were ekwentị gị see foto.
Tinye nọmba ID nke ịchọrọ n'ọhịa: Tinye nọmba ID.
Bulite foto gị (nke ọma ndọtị: jpg, jpeg ma ọ bụ png). Agafela ịdị arọ nke 1 Mo. Iji bulie foto gị tupu izipu, jiri saịtị ahụ slightpng.com.
Na peeji Update KYC, ị ga-ahụ ọkwa gị na "Pending" mode. Nye otu oge oge Pantheratrade iji kwado akwụkwọ njirimara gị.
Nzọụkwụ 12 / Pantheratrade
Kwụọ gị Venema iji kwado adreesị nkwụnye ego gị.
Voucher Profaịlụ bụ ndebanye aha adreesị nkwụnye ego gị iji nweta mmeri nke rọbọt. Adreesị a nwere ike ịbụ BTC, ETH ma ọ bụ USDT erc20 / trc20. Anyị na-akwado nkeUSDT trc20 (trx) maka ọnụ ahịa azụmahịa dị ala yana nkwụsi ike ya.
Pịa na njikọ Mpempe akwụkwọ profaịlụ Mgbe ahụ bọtịnụ Zụrụ akwụkwọ ego ọhụrụ
Họrọ crypto: ETH, BTC, USDT TRC20 ma ọ bụ USDT ERC20, wee kwado ya
N'okpuru ibe ahụ, pịa bọtịnụ ndenye akwụkwọ ntuziaka, a ga-ebuga gị na Coinpayments iji kwụọ ụgwọ ahụ.
Nzọụkwụ 13 / Pantheratrade
Mmelite Update Profaịlụ.
A na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ikike profaịlụ yana koodu akwụkwọ ikike gị ga-egosi na tebụl, kọlụm Venema. A na-akwado KYC gị. Anyị ga-emecha dejupụta profaịlụ.
Mbụ, tinye adreesị gị USDT trc20 na/ma ọ bụ erc20 wee kwado ya.
Ị ga-enweta koodu OTP site na email. Ekwesịrị itinye koodu a n'ubi nke mbụ.
N'ime mpaghara nke abụọ, tinye koodu Voucher nke ị ga-ahụ na ibe Mpempe akwụkwọ profaịlụ, Kọlụm akwụkwọ ikike. Wee kwado ya.
Nzọụkwụ 14 / PantheraTrade
Otu esi etinye isi ego azụmaahịa gị PantheraTrade ? (1/3)
A na-eche na a na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ikike ahụ.
Anyị laghachi na saịtị ahụ PantheraTrade iji tinye ego isi ahia na broker Ahịa Lego LCC.
Pịa na Akaụntụ COPYTRADE> Nkwụnye ego MT4
Wee pịa bọtịnụ ahụ Nkwụnye ego ọhụrụ MT4
Nọmalị nke a bụ nkwụnye ego mbụ gị PantheraTrade, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye isi obodo gị, ị ga-alaghachi na nzọụkwụ a. Buru n'uche na ego nkwụnye ego dabere na ịhọrọ ikike gị.
Ọnụ ego US $: gosi ego ịchọrọ itinye na dollar
Họrọ Akaụntụ: nọmba akaụntụ ATG gị Gold
Lelee igbe raara nye usoro ojiji, wee nyefee fọm a
Ogbo? / PantheraTrade
Debe isi obodo gị na Inkwụ ụgwọ. (2/3)
Dejupụta ozi ịgba ụgwọ gị, ya bụ, aha mbụ gị, aha ikpeazụ na adreesị ozi-e.
Họrọ Litecoin (LTC).
N’ikpeazụ, pịa bọtịnụ na-acha anụnụ anụnụ n’aka ekpe.
A ga-emeghe ibe ọhụrụ na CoinPayment na-enye gị ego ole yana adreesị ebe ị ga-etinye ego Litecoins LTC gị.
Biko mara, nke a ga -abụ adreesị nkwụnye ego ọhụrụ. Ọ gaghị abụ otu adreesị nkwụnye ego ka akwụkwọ ikike gị.
Debe ego ahia gi PantheraTrade. (3/3)
Otu nhazi dị ka ịzụta ikike. Na Binance, kwụọ ụgwọ ya site n'ịgbakwunye 0.001 na ego LTC achọrọ: https://www.binance.com/fr/.../crypto/LTC.
Tinye adreesị LTC nnata, nke ekwuru na Coinpayment.
Gosi ego LTC, tinyezie 0,001 na ọnụahịa ikpeazụ.
It Chere nkeji ole na ole. . Ga-enweta nkwenye email site na Binance na CoinPayment iji mee ka ị mara na e mere mbufe ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Ogologo oge nkwado teknụzụ nke Auto Trade Gold akwadoghị azụmahịa ahụ, ị ​​gaghị ahụ ego gị na ngwa MT4 gị.
Nzọụkwụ 13 / Pansaka / ATG-Sistemụ
Njikọ ATG Sistemụ na Pansaka
Jikọọ na ATG Sistemu
Iji jikọọ na https://atgbot.co, jiri otu email na paswọọdụ dị ka ọ dị Pantheratrade.
Chere ọtụtụ nkeji ka sistemụ wee cheba ikikere gị. Usoro a dị ire maka ịzụrụ ikike izizi gị yana maka nkwalite ikikere ndị ọzọ. Cala na -enye gị ohere ijikọ ikike ọhụrụ na akaụntụ azụmaahịa gị.
ị ga nweta ozi-e sitere na atgbot.co (Leleekwa spam gị).
Weghachite koodu akwụkwọ ikike na ID akwụkwọ ikike dị na ozi-e.
Jiri koodu gị gaa na webụsaịtị ATG System Pantheratrade ma mee ka ikike gị rụọ ọrụ: https://atgbot.co/user/ea/activate
Detuo mado ihe ndị dị n'ọhịa achọrọ.
Gosi nke ọma: Enwere m Akaụntụ Akaụntụ
Họrọ nke gị compte Gold
Wee kwado ụdị a.
⚠️ Jide n'aka na "ejikọtara" ikike gị. Pịa na bọtịnụ "Ntugharị" ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ruo mgbe nke a mere. Gbalịa ka awa ole na ole gachara ma ọ bụrụ na netwọkụ juru eju, ma ọ bụghị mepee a Tiketi nkwado teknụzụ ATG Sistemu ka ha rụọ ọrụ robot ATG 5 gị.
Nzọụkwụ 14 / MetaTrader 4
Otu esi eso ego gị na ngwa MetaTrader 4 ?
MT4 bụ ngwa mkpanaka efu na-enye gị ohere ịgbaso mgbanwe nke ego ị nwetara. Ma ị nọ na android ma ọ bụ IOS, ị ga-ahụ ya ngwa ngwa na Ụlọ Ahịa. Lelee akara ngosi nke ọma, ịchọrọ ụdị 4 nke MetaTrader.
Ozugbo arụnyere, anyị ga-ahazi ya na akaụntụ azụmaahịa gị. Iji mee nke a, ọ ga-abụrịrị na ị nwetala ozi-e PantheraTrade na 4 dị mkpa data.
Master Paswọdu: Nke gị ikikere
Paswọọdụ Investor (gụọ naanị): XXXXXX
Ihe nkesa: LegoMarketLCC2-LIVE
Na ngwa MT4, pịa Ntọala (akara ngosi aka nri ala)> Akaụntụ ọhụrụ> Jiri akaụntụ dị adị banye.
N'ime igbe ọchụchọ (n'elu), dee: LegoMarketLCC2-LIVE
Aha njirimara: Nbanye (nọmba). Ị nwekwara ike ịhụ ha na homepage nke Pantheratrade (akaụntụ MT4).
Okwuntughe: Okwuntughe onye ọchụnta ego (naanị ọgụgụ). Ọ bụrụ na ị tufuru ya, nwaa paswọọdụ ị jiri Pantheratrade.
Nzọụkwụ 15 / PantheraTrade
Etu esi ewepu ego gi na / ma obu isi obodo gi n'oge ọ bụla ?
Ị nwere ike ịdọrọ naanị na crypto nke a kpọtụrụ aha na nzọụkwụ 2. Ọ bụrụ na ị gosipụtara ihe ọ bụla USDT na adreesị Crypto, ị ga -enweta USDT. Biko mara na mwepu bụ opekempe nke $ 50 yana karịa $ 2000 kwa ụbọchị maka akaụntụ n'okpuru $ 100.000. Ewezuga $ 100.000 echekwabara (na enwetaghị ya), ị nwere ike ịdọrọ 10% nke isi obodo kwa ụbọchị. Gụọ 15 ruo 35 $ ụgwọ azụmahịa (n'agbanyeghị ego ole achọrọ), dabere na ego a họọrọ.
Mee ndọrọ ego si PantheraTrade
Iji wepu ego, laghachi na saịtị ahụ PantheraTradepịa Azụmahịa> Mwepu ego.
Họrọ ego ị tinyere na mpaghara adreesị crypto mgbe ị na -edebanye aha (USDT / LTC ma ọ bụ ndị ọzọ), wee kwado ya.
Foto 1 - Dejupụta ozi achọrọ:
Isi mmalite: Họrọ ma akaụntụ MT4 gị ma ọ bụ akaụntụ nkwụghachi ụgwọ gị. Ị nwekwara ike nwetaghachi na obere akpa ime gị (ọrụ ego maka ndị na-akwado).
Ọnụ ego US $: ego ị chọrọ ịdọrọ na dollar
Nabata ọnọdụ ndị ahụ wee kwadoo ya. A ga-ebugharị gị gaa na ibe ọhụrụ ma ị ga-enweta ozi-e gụnyere koodu OTP n'otu oge
Onyonyo 2 - Lelee ma nabata mwepụ ahụ:
N'okpuru ibe a, tinyegharịa paswọọdụ gị PantheraTrade ma ọ bụ 2FA na-echefughị ​​ugbu a ịgbakwunye koodu (Email OTP). Ọ bụrụ na ịnatabeghị ya, ọ nwere ike si na email gị (hotmail, yahoo...). Ịbanye na Gmail enweghị nsogbu. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mepee tiketi ma gwa ha ka ha gbanwee adreesị gị ugbu a na adreesị gmail.
Wee kwado azụmahịa ahụ.
Ị ga-echere nkezi nke awa 24 (ewezuga izu ụka) maka itinye ego nkwụpụ na mgbanwe mgbanwe gị. Nke a dabere na oge dị iche n'etiti Indonesia na obodo gị.
Otu esi akpọtụrụ nkwado teknụzụ Autotrade Gold ?
Iji kpọtụrụ otu n'ime mmadụ 70 n'azụ nkwado teknụzụ nke Pantheratrade, gaa n'ihu dị ka ndị a: tụgharịa asụsụ ozi gị oge niile n'asụsụ Bekee ma ọ bụ Indonesian (google translate bụ enyi gị), bụrụ onye ziri ezi na nke ziri ezi, nye ihe akaebe nke azụmahịa (txid), nwee obiọma na nkwanye ùgwù. Kpọtụrụ nkwado ma ọ bụrụ na enwere nsogbu, ọ bụghị ịjụ ajụjụ. Ndị nkwado, netwọk mmekọrịta na forums nwere ebumnuche a. Ezipụla ọtụtụ ozi, ọ baghị uru ma ghara ikwe ka edozi nsogbu ngwa ngwa, kama nke ahụ.
Mepee tiketi nkwado PantheraTrade
Isiokwu: okwu 4 ma ọ bụ 5 iji kọwaa nsogbu gị
Họrọ ngalaba: Nkwado Akaụntụ / Ego / Netwọk
Họrọ udi: Nhọrọ a dabere na mpaghara dị n'elu.
Ozi: Kọwaa nsogbu gị na Bekee ma ọ bụ Indonesian
Njikọ foto: Na -enye gị ohere ịgbakwunye foto nkọwa
Zipụ ozi gị.
A ga -ezitere gị azịza n'ime awa 24 (ewezuga ngwụsị izu). Nwee ndidi.
Ọ ga-amasị gị onye nkwado Robot ATG si PantheraTrade ?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị kpọtụrụ ndị enyi ma nye ha uru kwa ọnwa nke ihe dịka 15%, ị ga-achọ ịnye ha njikọ ntinye aka gị dị na ibe ahụ. Mmekọrịta> Dashboard
URL izipu na ndị na -edeba aha gị ga -adị ka nke a: https: //pantheratrade.ndị / denye aha /? r = IB ...
Ọrụ nke a ezi nna nna bụ iduzi ma nye onye ọ bụla chi ọdịnihu ya ndụmọdụ, site na ndebanye aha ruo na mgbake nke ego enwetara, site na mbufe akụ na cryptocurrency, na -akọwa ihe egwu dị na ya, iwepụta oge na nkwado teknụzụ ... nọrọ na kansụl na obiọma.
Isslọ ọrụ nkwado Autotrade Gold
Atụmatụ nbanye maka ndị ọrụ ochie nke Pantheratrade
Maka ndị investors debanyere aha na Pantheratrade tupu Maachị 18, 2022 na onye chọrọ ijikọ na ụdị ọhụrụ nke Pantheratrade.
Gaa na ibe: https://live.pantheratrade.tech
Tinye adreesị ozi-e nbanye nke akaụntụ ochie gị PantheraTrade wee pịa bọtịnụ nkwado.
Ị ga-enweta site email aha njirimara gị na paswọọdụ nwa oge gị nke a ga-ejikọta na ibe a: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
⚠️ Ọ bụrụ na ịnataghị email a, soro usoro ndị a:
Gaa na ibe: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
Pịa na Chefuru Paswọdu
Dee aha njirimara gị
Aha njirimara na paswọọdụ echefuru echefu na Pansaka
Maka ndị debanyere aha na AutoTrade Gold tupu Septemba 1, 2021, ọ nwere ike ị gaghị enweta nkọwa nbanye Pansaka gị site na email. Nke a bụ azịza ịnata ha:
Njikọ na backoffice: https://pansaka.co.id/panel/login.php
Pịa na njikọ: Chefuru okwuntughe gị?
Ị ga -abata na ibe ọzọ.
Pịa na njikọ: Chefuru Njirimara onye ọrụ?, wee tinye adreesị email gị.
Ị ga -enweta email mbụ na nbanye nbanye gị. Nke a bụ usoro nke nọmba.
Laghachi na ibe nbanye Pansaka: https://pansaka.co.id/panel/login.php, wee pịa ọzọ na njikọ ahụ: Chefuru okwuntughe gị? site na igosi njirimara njirimara gị (nọmba).
Ị ga -enwe ike igosi aha njirimara gị na okwuntughe ọhụrụ gị iji jikọọ na Pansaka.
Lekwasị anya na CEO nke Autotrade, Mr. Dinar Wahyu Saptian Dyfrig
Dinar Wahyu Kenzo bụ onye ama ama na Indonesia. Onye na-etinye ego a ma ama, ọ ghọrọ onye na-ahụ maka ngalaba IT na teknụzụ ọhụrụ n'aha otu ARTI. (Indonesia Trading Robot Association) nyochaa iwu na-akwadoghị trading owuwu na Indonesia na mkpakọrịta APLI ijikwa netwọk ahịa kemgbe 1984. Nwoke nwere nnukwu obi, ekele maka uru nke ụlọ ọrụ, ihe karịrị 10 nri ngwugwu e kesara Indonesians mkpa n'oge oge nke Covid. Ọ bụkwa onye njikwa nke ụlọ ọrụ RBG nwere oke na England, n'etiti Forex, ma na-akwado otu egwuregwu bọọlụ Indonesian, ya na Njikọ 000 na France.
Dinar Wahyu Saptian Dyfrig (etiti) CEO Autotrade / Pansaka na Bambang Soesatyo, ọkà okwu nke Indonesian nzuko omeiwu.
A nna nna, a godson
A na-edebanye aha ọ bụla site na njikọ ntinye aka!
Ma kwere m, ọ naghị afụ ụfụ ọzọ!
Ọ dịghị mfe ịmalite ụdị njem a ma ọ bụrụ na ị nweghị ahụmịhe azụmaahịa mbụ ma ọ bụ cryptocurrency. Nke a bụ ya mere m ji kwe onwe m ka m soro gị, iji nyere gị aka ịtọ akaụntụ gị n'etiti gị broker (ore ahia) na gị ere robot, zaa ajụjụ ndị dị mkpa ma nye nkwado teknụzụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta njikọ njikọ na ụfọdụ robots, ọ bụ n'ihi na achọghị m ịkọ ya: ma m na-enyocha ya, ma ọ bụ na m na-enyo enyo. Na mgbakwunye, ị ga-enwe ike ijikwa nkwado teknụzụ ma soro ndị ntinye aka gị n'ụzọ ziri ezi, n'ihi ya, anaghị m etinye ihe ize ndụ nke inye gị njikọ ntinye aka na-enweghị njide.
Broker ASIC debara aha
🥇 Isi ego min. ± $ 250
Na -eche na Pansaka
Ntinye ego ọla edo
isi obodo min. ± € 50
Isi obodo min. $ 10
Na-efu ozi ọ bụla?
Egbula oge ịkpọtụrụ m na Telegram ka m wee nye gị ndụmọdụ ma nye gị enyemaka m.
Kpachara anya maka aghụghọ Forex na weebụ
Chọpụta aha ojii nke ụlọ ọrụ na saịtị enweghị ikike nke AMF nyere. Ọ dịghị onye anyị ígwè ọrụ ma ọ bụ brokeresoghi.
Omume gara aga abụghị nkwa nke arụmọrụ n'ọdịnihu.
Enweghị arụmọrụ dị elu na-enweghị nnukwu ihe egwu. N'ahịa ahịa, arụmọrụ gara aga anaghị emegharị onwe ya.
Enweghị ndụmọdụ itinye ego na saịtị a
Ịzụ ahịa na-ekpughere gị n'ihe ize ndụ nke mfu nke kwekọrọ na nkwụnye ego ma dị mma maka ndị ahịa maara nke ọma bụ ndị nwere ego iji buru ihe ize ndụ a. Nsonaazụ gara aga anaghị egosi nsonaazụ n'ọdịnihu. Ọ bụ naanị onye ọbịa na-ahụ maka iji ozi enwetara wee were ihe egwu niile metụtara ojiji a. Karịsịa, ọ dị onye ọbịa ka ọ mee ihe niile dị mkpa iji chekwaa iguzosi ike n'ezi ihe nke isi obodo ya. Robots-trading.fr, cryptonithe.com ma ọ bụ mon-conseiller-crypto.fr na ndị na-achị ya agaghị ata ụta maka ọghọm ọ bụla enwere ike.
Gụọ anyị Usoro Ọrụ na nke anyị Akwụkwọ ikike nghọta.